Malaia garnet, si Kenya / pyralspite na obere calcium / Video
Malaia garnet, si Kenya
Malaia garnet ma ọ bụ Malaya garnet bụ aha varietal gemo for light to dark slightly orange, orange orange, or orange orange garnet, nke na-agwakọta na pyralspite usoro pyrope, almandine, na spessartine na obere calcium. A sụgharịrị aha Malaia na Swahili iji pụtara, "onye na-enweghị ezinụlọ". A na achọta ya n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa, na ndagwurugwu Umba dị n'akụkụ Tanzania na Kenya.
A na-achọta ụdị anụ dị iche iche na agba dị iche iche na-acha uhie uhie, odo, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo odo, aja aja, acha anụnụ anụnụ, nwa, pink, na-enweghị ntụpọ, na-acha uhie uhie.
Ihe nlele nke na-egosi nnukwu nchara na-acha ọbara uhie nwere ike igosi.
Akwukwo umu akwukwo ndi mmadu puru inye ihe n 'uzo di iche iche di iche iche bu ihe ndi ozo eji eme ihe dika ulo abrasive. A na-ejikọta ihe na-eme ka ịnweta ihe dị ka vitreous (nke yiri iko) ma ọ bụ resinous (amber-like).
Achịcha bụ nesosilicates nwere usoro izugbe X3Y2 (Si O4) 3. Ebe X na-ejikarị cations (Ca, Mg, Fe, Mn) 2 + na saịtị Y site na cations atọ (Al, Fe, Cr) 3 + na ụkpụrụ octahedral / tetrahedral na [SiO4] 4 - na-etinye tetrahedra. A na-ahụkarị ihe ndị na-ewu ewu na àgwà crystal crystal, ma a na-ahụkarị ha na trapezohedron. (Rịba ama: okwu ahụ bụ "trapezohedron" dị ka a na-eji ebe a na ọtụtụ akụkụ akwụkwọ na-ezo aka n'ụdị a na-akpọ Deltoidal icositetrahedron na geometry siri ike.) Ha na-eti mkpu n'ime usoro cubic, nwere atọ axes nke hà n'ogologo ya na nke dabere na ibe ha . Achịcha anaghị egosi akwachi, ya mere, mgbe ha na-agbaji na nrụgide, a na-emepụta akụkụ ndị na-adịghị mma (conchoidal).
Ebe ọ bụ na ngwakọta nke garnet dịgasị iche iche, ihe dị na ụdị ụfọdụ dị ike karịa ndị ọzọ. N'ihi ya, ìgwè a na-egwupụta ihe na-egosi nrụsi ike na Mohs nke 6.5 na 7.5. A na-ejikarị ụdị umu osisi dị ka almandine mee ihe maka abrasive purposes.